ယိုးဒယားက ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းအကြောင်းတစေ့တဇောင်း .. (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 10:05 PM | No မှတ်ချက် | Demo Wai YanFollow
ထို NGO အဖွဲ့ တွေကို. .မြန်မာပြည်က အမျိုးသမိးကြိးတဦးက.. ၁၉၉၁ ကတည်းက နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၂၈၀၀၀ ရာသက်ပန်လှုဒါန်းနေတာရောသိပါရဲ့ လား။ အခုဆိုထိုပမာဏထက်ပိုများပြီး..ပိုမိုဖိအား ပေးနေပါပြီ ။
၁၉၉၄ CUE magazine မှာပါလာလို့၁၉၉၅ နှစ်ကုန်မှာ.. ကျနော်ဘာသာပြန်ပြီး. .မြေအောက် ဆောင်းပါးဖြန့် ချီရေးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ မဏ္ဍပ်တိုင်တက်နေတာ လျော့။ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြကြပါ။ ထိုမြန်မာမလေးများလည်း..ပျော်လို့ ..ယားလို့ သွားလုပ်ကိုင်နေကြတာမဟုတ်ပါ ။
ထိုမြန်မာမလေးများ မကြာမှီပြန်အပို့ ခံရပါမယ်။ ဗျူးကြည့်ပါ။ မလွှဲသာလွန်းလို့ လုပ်နေကြရတာပါ။ ကြံ့ ဖွတ်တွေခိုးတာ. .ပြည်သူတွေ လုပ်စားစရာမကျန်အောင် ခိုးလို့ ..ထိုင်းကိုထွက် ဖါခံနေကြရတာပါ။
ထိုးဒယားက အနိပ်ခန်း ၊ ကာရာအိုကေအခန်း၊ ဗြောင်ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေဟာ.. ယိုးဒယား ဗိုလ်ချုပ်တွေ ၊ ရဲဗိုလ်ချုပ်တွေ အဆင့်လောက်မှ ဖွင့်ခွင့်ရှိတာပါ။ သာမန်လူလား.. ဧရာမကွန်ယက်ကြိးပါ။ အခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ပါ ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး.. ဗိယက်နမ်စစ်ပွဲမှာ ပိုမိုကြီးထွားလာတာပါ။ ကျနော် ၁၉၈၁ ခုနစ် ၆လ- လယ်ပိုင်းက..ကော့ကရိတ်မှာ ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့စနည်းနာရင်း. .ကော့ကရိတ်ကိုသွားလည်ပါတယ်။ တည်းတာက မြို့ နယ်ကောင်စီဥက္ကဌ (ကရင် လူမျိုး) အိမ်။ သူ့ အိမ်အနီးက လူငယ်တဦးနဲ့ ရင်းနှီးရာက.. သူက..တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ 
နိင်ငံရေးမှုးတဦးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်။ (၆ -လပိုင်းမှ သွားရတာက.. မျက်မှန်တင်ဦး..အဖမ်းခံရပြီးစ..ထောက်လှမ်းကွန်ယက် အားနည်းနေချိန်ကို ရွေးရတာပါ ) ကျနော်က..ထိုခေတ်က..မ.ဆ.လ ခေတ် ကလွန်ကဲ သတင်းတွေကို.. အသံလွှင့်ချင်လို့ ဆွေးနွေးလိုက်တယ် ။ သူက မဲဆောက်ကို..ယာဉ်လမ်းပွင့်လျင်..လာခဲ့ရန်။ ဆက်သွယ်ရမည့် လူကို..ပေးတယ်။ ကားတန်းရှိတော့ လိုက်သွားတယ်။ သူ့ လူက မဲဆောက်က။ သူက..ကျနော့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိလို့ ..ညဖက်.. နိုက်ကလပ်အမည်ခံ..ပြည့်တန်ဆာခန်းမှာဘဲ ချိန်းတယ်။ ထောက်လှမ်းတွေကများလွန်း။ ထိုခေတ်က BBC VOA ဘဲရှိတယ်။ အသံလွှင့်ချက်ကို..စစ်တပ်က အသံဖျက်နေတော့..ဘာမှ မသဲကွဲ ။ ကျနော်က….စနေ နင့်
တနင်္ဂနွေ ..၂.ရက်ဘဲလွှင့်မယ်။ လွှင့်မှာက..မြန်မာ့အသံ လှိုင်းကို နစ်ဖက်ခွ..လွှင့်မယ်။ ဖျက်ချင်ဖျက်။ ညနေ ၈.၀၀ နာရီ မြန်မာ့အသံ သတင်းလွှင့်ချိန်မှာ..၁၅ မိနစ်ဘဲလွှင့်မယ် ။ သူတို့ က..သူတို့ တပ်ထဲဘဲ..ဝင်ဖို့။ ဆရာဝန်ဆိုတော့.အလွန်လိုချင်တယ်။ ကျနော်က ရေဒီယိုပါလုပ်ခွင့်ရလျင်..ဝင်မယ်။ ၄ - ရက်မြောက်နေ့ ချိန်းထားတယ် ။ ဒါပေမည့်..မြဝတီက ကျနော်တည်းသည့်အိမ်က အိမ်ရှင်က..ဆရာမဲဆောက်မှာ တွေ့ နေသူတွေက အမဲရောင်လူတွေနော်..သတိပေးလာလို့ ..၄ - ကြိမ်မြောက်တွေ့ မှာကိုဖျက်လိုက်ရတယ်။ ဆက်တွေ့ လျင် ကျနော်အဆွဲခံရတော့မယ် ။ သူတို့ နဲ
့ တွေ့ တဲ့ တညနေမှာ.. ဆိုင်ရဲ့ နောက်ဖေးချောင်းလေးထဲမှာ..မိန်းခလေးတွေ ကို်ယ်လုံးတီး ရေချိုးနေကြရတယ်။ ရေက ညစ်ပတ်နေတဲ့ရေနော်။
ရေချိုးခန်းမှာ ရေအသန့် နဲ့ရေ..၅- ၈ ခွက်လောက်လောင်းကြရတာ။ မြန်မာပြည်က
တိုင်းရင်းသူလေးတွေ။ မတရားခိုင်းစားပြီး..ရေတောင် မသထာတာနော်။ ကျနော် အဲဒီကထည်းက ရင်နာနေတာ ။ ယိုးဒယားက အဲဒီလောက်အထိ လွန်တာ။ တခါ မနက်စာဆိုလျင်..စားတော်ပဲပြုတ်လေး.. လက်တဆုတ်စာနင့် ကြက်သွန်လှိးထားတာလေး။ ညနေစာကို..ဆိုင်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကိုမှီစားကြရတဲ့ဘဝ။ ကြေးကျတော့လဲ..ပေးသလောက်သာယူကြရတာ။ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေအပေါ် လွန်လွန်ကဲကဲ..လူလည် လုပ်နေကြတာ.. ဘယ်အမျိုးချစ်က..ဆောင်းပါနဲ့ ဖွင့်ချကြပါသလဲ။
ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖိုစဉ်းစားခဲ့ဖူးလဲ။ .ထောက်ပံ့ချင်သပဆို..ခင်ဗျားတို့ ..ဖြုန်းနေတဲ့ တနေ့ ကွမ်းဖိုး..၁၀၀၀ ကျပ်လျော့စားပါဦး။ ဒိုင်လျို..သုံးနေတဲ့ အသုံးတွေလျော့ပါဦး ။ မသိဘူးထင်မနေပါနဲ့။ အလှူထက် အခန်းနားမှုး မိုက် ကပိုကောင်း နေတဲ့ခေတ် ရပ်တော့။ ကျနော်ရေစီးအားလျပ်စစ် အရင်စလိုစချင်နေတာ..ရတဲ့ အမြတ်နဲ
့..ထိုင်းက မြန်မာ ၄-သန်းကျော်ကို..၂ - နစ်ကနေ - ၄ နစ်အတွင်းအကုန်ပြန်ခေါ်နိုင်တယ်။ သမ္မတဦးထင်ကျော်ကိုလဲ…ထိုင်း ၊ မလေးရှားက မြန်မာတွေ ဘယ်တော့လောက် ပြန်ခေါ်နိုင်မယ်..ပြန်ခေါ်ဖို့ဘယ်လိုစီမံချက်ရေးဆွဲထားပါတယ် မေးပေးကြပါဦး။ ကျနော်ကတော့ …အမြန်ဆုံး..ပြန်ခေါ်နိုင်တယ်ဗျာ ။ ဒါကိုတော့..ရဲရဲကြိး အာမခံပေးရဲတယ်။ သူတို့ ဘဝတွေ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ကြပါ ဗျာ။ ကိုယ့်မြန်မာတွေပါဘဲ။ ထိုင်းက မြန်မာဘုရင်ကို ဘယ်လိုခုတ်လို့ ပြေးရတာကို.. သမိုင်းသင်ရီုးမှာ.. ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားတာကို… ထိုင်းမှာ စာသင်နေရတဲ့ မြန်မာကလေးငယ်တွေ ခေါင်းငုံ့ ခံနေကြရတာပါ။ အခု..
အမရပူရမှာ ပြင်ဆင်နေသည့် ထိုင်းဘုရင် အရိုးဂူသာ.. ထိုင်းဘုရင်ရဲ့ .. အရိုးစစ်မှန်လျင်.. ထိုင်းဘုရင်အဖမ်းခံရ.. စစ်သုံ့ ပန်းဖြစ်ရတာကို.. သူတို့ သမိုင်းမှာ ထည့်ရမည့်အရေး..အတော်လေးခေါင်းခဲနေကြရပါပြီ ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးထင်ကျော် ကို မေးမြန်းခွင့်ရှိကြသူများ..ထိုင်းက မြန်မာကျွန်တွေနင့်..မြန်မာမလေးများ ပြန်လည် ကယ်ဆယ်ရေး.. မေးပေးကြပါဦးဗျာ။ အားလုံးကို လေးစားလျှက် လှိုင်မြင့်